IsiGaba esinye seBS
I-DIN Rail Isigaba esinye
IZiseko zoPhuculo lweMitha (AMI)
Isisombululo se-C & I
Izisombululo zeN +
Uphuhliso lweProjekthi kunye neNkxaso-mali
Ulawulo lwe-O & M
N + Zonke-in-Isisombululo
Isisombululo soLawulo lokuSebenza ngamandla
Isisombululo se-AMI eLaos
I-Metering eSebenzayo eyiNdleko kuMbindi Mpuma
IProjekthi yeNkonzo yaMandla eDityanisiweyo yoohola wendlela uZhangshi
Isiseko seKhiphedi ye-Smart Isigaba esi-3 seMitha esihlawulelwa kwangaphambili LY-SM350
Imitha ye-Meter engaqondakaliyo yesiGaba esithathu (i-CTVT isebenza) LY -...
I-LY-SM efanelekileyo yesigaba esithathu esingathanga ngqo (...
I-DIN-Rail Smart Isigaba esinye seMitha ehlawulelwa kwangaphambili LY-SM120
I-Smart Keypad Isigaba esinye seMitha ehlawulwa kwangaphambili LY-SM150
Imitha yesiGaba esinye esiQhelekileyo
I-LY-BM11 yeemitha zii-metres zesigaba esinye ezingabizi mali ininzi, ezichaphazela abathengi beeprojekthi kunye neeprojekthi zemitha ezingaphantsi. Zichanekile kwaye zikhuselwe kakuhle ngemisebenzi echasene nokuphazamiseka, efanelekileyo ukuqokelela ingeniso yexabiso eliphantsi kunye nezisombululo zokhuselo.
I-LY-BM11 yeemitha ziyilelwe ngokusekwe kubume obuguqukayo obunikezela ngeendlela ezininzi ngokungqinelana neemarike kunye neemfuno zabaxumi.
Imitha yeeKhadi eziSebenzi ezihlawulelwa ngombane ze-LY-SM150
I-LY-SM150 iimitha ezihlawulelwa kwangaphambili ziimitha zombane ze-AMI ezikrelekrele zombane, kunye ne-KE edityanisiweyo / uhlobo lweKhadi leSmart kunye / okanye iindlela zohlobo lwekhiphedi. Umsebenzi wabo owahlukileyo kwimodyuli yonxibelelwano ye-plug-and-play idala ukubanakho kokutshintshiselana kunye nokusetyenziswa kweendlela zonxibelelwano ezinentambo ezinokuthenjwa kunye ezingenazingcingo, ezifanelekileyo indawo yokuhlala kunye nabathengi abancinci beC & I.
I-LY-SM150 iimitha zothotho ezihlawulelweyo zichanekile kwimilinganiselo yokulinganisa kunye nokubeka iliso kwimithamo kunye nenethiwekhi kunye nemisebenzi yokulwa nokuphazamiseka, ibenza ukuba balungele ukuqokelelwa kwengeniso kunye nezisombululo zokhuselo. Ziyilelwe ngokusekwe kwi-20-bit Token ngokungqinelana ne-STS okanye ii-CTS ezichaziweyo, ukuthobela ngokupheleleyo i-DLMS / COSEM, imigangatho ye-IDIS kunye nokuqinisekiswa nge-DLMS, MID, IDIS, STS, nezatifikethi ze-SABS ukuqinisekisa ukusebenzisana kwazo kwiqonga le-AMI
Imitha ye-C & I CT / CTPT eyi-Smart
I-C & I-CT / i-PTCT yamanqanaba amathathu e-CT / PTCT aqhagamshelwe kwi-Smart Energy Meter sisiseko esiphakamileyo seMeter yokulinganisa amanqanaba amathathu e-AC asebenzayo / amandla asebenzayo kunye nobunzima be50 / 60Hz. Inemisebenzi eyahlukeneyo ephucukileyo yokuqonda iMilinganiselo ye-Smart kunye noLawulo lwamandla, eneempawu zokuchaneka okuphezulu, ubuntununtunu obugqwesileyo, ukuthembeka okuhle, uluhlu olubanzi lokulinganisa, ukusetyenziswa kancinci, ulwakhiwo oluqinileyo kunye nembonakalo entle, njl.
I-LINYANG SPLIT-TYPE SINGLE-ISIGABA SOKUXELWA KOMJONGO WOKUGQIBELA I-KEYPAD
I-Linyang Split-uhlobo lwenqanaba elinye le-DIN kaloliwe yokunyusa iphedi yamandla emitha yemitha yimitha ye-IEC esemgangathweni yamandla esetyenziselwa ukulinganisa isigaba esinye samandla asebenzayo e-AC ngamaza ama-50 / 60Hz kunye nomsebenzi wekhadi kwangaphambili ngokusebenzisa iphedi yamaqhosha kunye neTOKEN. Xa abathengi befuna ukuthenga umbane, indawo yokuthengisa iya kubabonelela ngama-20-bit TOKEN ebhalwe ngolwazi lokuhlawula umbane. Abasebenzisi bangenisa i-TOKEN kwimitha ukusuka kwiphedi yamaqhosha, emva koko imitha ibala i-TOKEN ize ihlawule imitha. Intlawulo ye-TOKEN yenziwe ngamanani angama-20. Inkqubo yokudlulisa idatha sisikhalazo ngomgangatho we-STS.
Iimitha ezi-3 zeSigaba seMitha LY-SM300
I-LY-SM300 yeemitha zi-AMI eziphambili zesigaba esithathu seemitha zombane, ezinempawu ezizodwa zemodyuli yokunxibelelana kweplagi kunye nokudlala, ukudala ukubanakho kotshintshiselwano kunye nokusetyenziswa kweentlobo zonxibelelwano ezithembakeleyo ezingena zingcingo kunye nocingo, ezisetyenziselwa indawo yokuhlala kunye nabathengi abancinci beC & I.
I-LY-SM300 yeemitha zibonelela ngezixhobo ngezinga eliphezulu lokuchaneka kunye nokuthembeka ekulinganiseni kunye nokubeka iliso kumthwalo kunye neeparitha zenethiwekhi kunye nemisebenzi yokulwa nokuphazamiseka, ibenza ukuba balungele ukuqokelelwa kwengeniso kunye nezisombululo zokhuselo. Ziyilelwe ukuthobela ngokupheleleyo imigangatho ye-DLMS / COSEM IEC kwaye ziqinisekisiwe ngesiqinisekiso se-DLMS.
Isigaba seMitha esinye seSmart LY-SM160
I-LY-SM160 yeemitha ziimitha eziphambili zombane ze-AMI zesigaba esinye, kunye ne-PLC edityanisiweyo kunye / okanye imodyuli yonxibelelwano ye-plug-and-wireless, esebenza kubathengi beC & I abancinci.
I-LY-SM160 yeemitha zibonelela ngezixhobo ezinobungakanani obuphezulu bokuchaneka kunye nokuthembeka ekulinganiseni kunye nokubeka iliso kumthwalo kunye neeparitha zenethiwekhi kunye nemisebenzi yokulwa nokuphazamisa, ibenza ukuba babe nezixhobo ezifanelekileyo zexabiso eliphantsi zokuqokelela ingeniso kunye nezisombululo zokhuselo. Ziyilelwe ukuthobela ngokupheleleyo imilinganiselo ye-DLMS / COSEM kunye ne-IDIS kwaye ziqinisekisiwe nge-DLMS kunye nezatifikethi ze-MID ukuqinisekisa ukusebenzisana kwazo kwiqonga le-AMI.
Imitha ye-Smart Three Phase ngqo ye-Mitha (i-CT isebenza) LY-SM300CT
I-LY-SM300-CT ziqhubela phambili nge-AMI ngokungangqalanga kwizigaba ezintathu zeemitha zombane ezibonelela ngezixhobo ngokuchaneka okuphezulu kweklasi 0.5s / 0.2s kunye nokuthembeka okuphezulu, okusebenzayo kubathengi abahlukeneyo be-C & I kunye nesilinganisi semitha. Zibonakaliswe ngemisebenzi eyomeleleyo kubandakanya ukulinganisa kunye nokubeka iliso kumthwalo kunye neeparamitha zenethiwekhi ngaphezulu kwamandla ombane kunye noluhlu lwangoku, ukonyusa umgangatho wokujonga amandla kunye nokulinganisa i-THD njl njl, ezixhobisa izixhobo kunye namashishini abucala ngokulula nangokuchanekileyo esweni amanethiwekhi abo ombane.
Uyilo lweemodyuli ze-LY-SM300-CT lubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zonxibelelwano ezinentambo kunye nokunxibelelana ngaphandle kwamacingo. Baqinisekisiwe yi-MID, i-DLMS / i-COSEM kunye ne-IDIS ukuqinisekisa iqonga lokulinganisa elinokuthenjwa nelisebenzisanayo lenkqubo ye-AMI.
Imitha ye-Smart Three Phase Indeter Meter (i-CTVT esebenzayo) LY-SM300-CTVT
I-LY-SM300- I-CTVT ziqhubela phambili i-AMI ngokungathanga ngqo kwiimitha zombane zesigaba esibonelela ngezixhobo ngokuchaneka okuphezulu kweklasi 0.5s / 0.2s kunye nokuthembeka okuphezulu, okusebenzayo kubathengi abahlukeneyo be-C & I kunye nesilinganisi semitha. Zibonakaliswe ngemisebenzi eyomeleleyo kubandakanya ukulinganisa kunye nokubeka iliso kumthwalo kunye neeparamitha zenethiwekhi ngaphezulu kwamandla ombane kunye noluhlu lwangoku, ukonyusa umgangatho wokujonga amandla kunye nokulinganisa i-THD njl njl, ezixhobisa izixhobo kunye namashishini abucala ngokulula nangokuchanekileyo esweni amanethiwekhi abo ombane.
Uyilo lweemodyuli ze-LY-SM300- CTVT ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zonxibelelwano ezinentambo kunye nokunxibelelana ngaphandle kwamacingo. Baqinisekisiwe yi-MID, i-DLMS / i-COSEM kunye ne-IDIS ukuqinisekisa iqonga lokulinganisa elinokuthenjwa nelisebenzisanayo lenkqubo ye-AMI.
I-LY-SM350 yechungechunge oluhlawulelwa kwangaphambili zii-AMI smart zigaba ezintathu zombane ohlawulelwa ngombane, kunye ne-BS edityanisiweyo / uhlobo lweKhadi leSmart kunye / okanye uhlobo lokhetho lwephedi yamaqhosha, zinokuqwalaselwa kwimowudi ehlawulelweyo okanye yePostpaid. Umsebenzi wabo owahlukileyo kwimodyuli yonxibelelwano ye-plug-and-play idala ukubanakho kokutshintshiselana kunye nokusetyenziswa kweendlela zonxibelelwano ezinentambo ezinokuthenjwa kunye ezingenazingcingo, ezifanelekileyo indawo yokuhlala kunye nabathengi abancinci beC & I.
I-LY-SM350 iimitha zothotho ezihlawulelweyo zichanekile kwimilinganiselo yokulinganisa kunye nokubeka iliso kwimithamo kunye nenethiwekhi kunye nemisebenzi yokulwa nokuphazamiseka, ibenza ukuba babe nakho ukuqokelela ingeniso kunye nezisombululo zokhuselo. Ziyilelwe ngokusekwe kwi-20-bit Token esekwe kwi-STS okanye kwi-CTS, ihambelana ngokupheleleyo ne-DLMS / COSEM, imigangatho ye-IDIS kwaye iqinisekisiwe ngezatifikethi ze-DLMS, MID, IDIS, STS, kunye nezatifikethi zeSABS ukuqinisekisa ukusebenzisana kwazo kwiqonga le-AMI.
Imitha emithathu yeSigaba seMitha LY-SM360
I-LY-SM360 yeemitha zii-AMI eziphambili zesigaba sesithathu seemitha zombane, kunye ne-PLC edityanisiweyo kunye / okanye imodyuli yonxibelelwano ye-plug-and-wireless, esebenzayo kubathengi beC & I abancinci.
I-LY-SM360 yeemitha zibonelela ngezixhobo ngezinga eliphezulu lokuchaneka kunye nokuthembeka ekulinganiseni kunye nokubeka iliso kumthwalo kunye neeparameter zenethiwekhi kunye nemisebenzi yokulwa nokuphazamisa, ibenza ukuba babe nezixhobo ezifanelekileyo zexabiso eliphantsi zokuqokelela ingeniso kunye nezisombululo zokhuselo. Ziyilelwe ukuthobela ngokupheleleyo imilinganiselo ye-DLMS / COSEM kunye ne-IDIS kwaye ziqinisekisiwe nge-DLMS, izatifikethi ze-MID ukuqinisekisa ukusebenzisana kwazo kwiqonga le-AMI.
Imitha yeSigaba esinye seSmart LY-SM 150Postpaid
I-LY-SM150 iimitha ezihlawulelwa kwangaphambili ziimitha ze-AMI ezikrelekrele zesigaba esinye, ezinempawu ezizodwa zemodyuli yonxibelelwano ye-plug-and-play, ukudala amathuba otshintshiselwano kunye nokusetyenziswa kweentlobo zonxibelelwano ezinentambo ezinokuthenjwa kunye nokunxibelelana ngaphandle kwamacingo, zilungele indawo yokuhlala kunye nobukhulu beC & I abathengi.
I-LY-SM150 iimitha ezihlawulelwa ngokuchanekileyo zichanekile kwimilinganiselo yokulinganisa kunye nokubeka iliso kwimithamo kunye nenethiwekhi kunye nemisebenzi yokulwa nokuphazamiseka, ibenza ukuba balungele ukuqokelela ingeniso kunye nezisombululo zokhuselo. Ziyilelwe ukuthobela ngokupheleleyo imigangatho ye-DLMS / COSEM kunye ne-IDIS kwaye ziqinisekisiwe nge-DLMS, MID, IDIS izatifikethi zokuqinisekisa ukusebenzisana kwazo kwiqonga le-AMI.
Imitha emithathu yeSigaba seMitha LY-SM 350
I-LY-SM350 iimitha ezihlawulelwa kwangaphambili zi-AMI zigaba ezintathu zeemitha, ezinempawu ezizodwa zemodyuli yonxibelelwano ye-plug-and-play, ukudala amathuba otshintshiselwano kunye nokusetyenziswa kweendlela zonxibelelwano ezinentambo ezinokuthenjwa kunye nokunxibelelana ngaphandle kwamacingo, ezilungele indawo yokuhlala kunye nabathengi abancinci beC & I.
I-LY-SM350 yeemitha zothotho oluchongiweyo zichanekile kwimilinganiselo yokujonga kunye nokubeka iliso kumthwalo kunye neeparamitha zenethiwekhi kunye nemisebenzi yokulwa nokuphazamiseka, ibenza ukuba balungele ukuqokelelwa kwengeniso kunye nezisombululo zokhuselo. Ziyilelwe ukuthobela ngokupheleleyo imigangatho ye-DLMS / COSEM kunye ne-IDIS kwaye ziqinisekisiwe nge-DLMS, MID, IDIS izatifikethi zokuqinisekisa ukusebenzisana kwazo kwiqonga le-AMI.
Umzi mveliso: Hayi 666 Linyang Road, Qidong, kwiPhondo laseJiangsu 226299, China
Kwikomkhulu: 18F, ukwakha 1, Zhengda Wudaokou Plaza, No. 1199 Minsheng Road, Pudong New Area, Shanghai 200135, China
Ukuba ufuna ukufumana ulwazi lwamva nje, nceda ugcwalise le fomu ingezantsi.
umtya (48) "/www/wwwroot/global.linyang.com/wp-content/cache"